ICofttek Malunga Nathi-Ukutya ukutya okongeziweyo
ICofttek Holding limited
ICofttek Holding Limited efunyenwe ngo-2008, lishishini eliphakamileyo lobugcisa bamachiza lokudibanisa imveliso, i-R&D kunye nentengiso. Ifumana indawo kwiLuohe Chemical Industry Park, ezinikele kuphando kunye nophuhliso lwamashishini amachiza aphambili, ukubonelela ngeemveliso eziphucukileyo kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu kwishishini lamayeza.
ICofttek ineqonga elinamandla le-biotechnology, itekhnoloji yeekhemikhali kunye novavanyo lohlalutyo, igxile kuphuhliso lwee-API, iikhompawundi kunye neekhemikhali ezifanelekileyo, ngelixa inikezela ngeenkonzo ezisemgangathweni zeCRO, iinkonzo zeCMO novavanyo lokuvavanya kunye neenkonzo zophando ezisemgangathweni kwiinkampani kwicandelo lefomedical.
ICofttek ineqela lolawulo elinamava kunye neqela lokuqala leqela le-R & D, kubandakanya iingcali ezininzi ezibalaseleyo kwiinkqubo zophuhliso lwemveliso yamachiza kunye nophando olusemgangathweni wamayeza. Kuyaziwa kwaye kukhuphiswano kubalulekile kule mikhakha ye-chemistry yemichiza, iteknoloji yokwenziwa, ukuphuhliswa kweziyobisi, i-bioengineering, njl njl. Abathengi beenkampani kunye namaqabane beza kwihlabathi liphela, besenza ubudlelwane obusondeleyo neenkampani ezininzi zamayeza eNyakatho Melika, eYurophu, e-India kunye China.
Ukugxininisa kumgaqo "Isiseko esiseMgangathweni, uMthengi kuqala, Inkonzo yokuThembeka, Izibonelelo zoMbane", cofttek Holding Limited. Inika abathengi iimveliso ezanelisayo ngovavanyo olugqibeleleyo kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu.
ICofttek ifunyenwe ngo-2008, lishishini lokuxhasa ukutya okunexabiso eliphakamileyo lokudibanisa imveliso, iR & D kunye nentengiso.
IziBonelelo ezi-5 eziPhezulu zokuthatha i-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
Esona Sibonelelo seNootropic seAlfa GPC ngo-2020
Esona Sibonelelo siGqibela ngokuGuga seNicotinamide Mononucleotide (NMN) ngonyaka ka-2020